तिन वटा बैंकले तोके निक्षेपमा नयाँ ब्याजदर, कुन बैंकको कति ? – BUSINESSPANA.COM
तिन वटा बैंकले तोके निक्षेपमा नयाँ ब्याजदर, कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं–आज (बैशाख १ गते) देखी लागू हुने गरी छुट्टाछुट्टै तीनवटा बैंकले निक्षेपमा नयाँ ब्याजदर तोकेका छन । सिभिल बैंक, कामना सेवा विकास बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंकले एकै साथ नयाँ ब्याजदर तोकेका हुन ।
तोकिएको नयाँ ब्याजदर अनुसार सिभिल बैंकले ३.५५ प्रतिशत देखी ८. ५५ प्रतिशत सम्म ब्याज आफ्ना निक्षेप कर्ताहरूलाई प्रदान गर्ने छ । बैंकले साधारण बचत खाता अन्तरगत मेरो बचत खाता, नारी बचत खातामा समान ३.५५ प्रतिशतका दरले ब्याज प्रदान गर्ने छ । यस्तै प्रिमियम बचत खातामा ५.४५ प्रतिशत ब्याजदर कम्पनीले तोकेको छ । यसैगरी कम्पनीले मुद्दती निक्षेप अन्तरगत तिन महिने मुद्दती निक्षेपमा ८.१ प्रतिशत, ६ महिना देखी १ वर्ष सम्मको मुद्दती निक्षेपमा ८.२५ प्रतिशत र १ वर्ष बढिको मुद्दती निक्षेपमा ८.५१ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ ।
यस्तै नेपाल बङ्गलादेश बैंकले पनि निक्षेपमा नयाँ ब्याजदर तोकेको छ । बैंकले तोकेको नयाँ ब्याजदर अन्तरगत २.७५ प्रतिशत देखि ७.७५ प्रतिशत सम्म निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याज प्रदान गर्ने छ । कम्पनीले साधारण बचत तर्फ सोसल सर्भिश डिपोजिट, नर्मल सेभिङ, रजत बचतम समान २.७५ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्नेछ । यस्तै कम्पनीले मुद्दती निक्षेप तर्फको पनि ब्याजदर तोकेको छ जस अन्तरगत ३ महिना देखि ६ महिना सम्मको पद्धति निक्षेप खातामा ७.२५ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्ने छ । ६ महिना बढि अवधिको मुद्दती निक्षेपको लागी कम्पनीले ७.७५ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्नेछ । यसैगरी विदेशी मुद्रा अन्तरगत अमेरिकी डलर बचत गरे वापत कम्पनीले १ प्रतिशत र युरोपियन युरो बचत गरे वापत ०.५० प्रतिशत ब्याजदर बैंकले प्रदान गर्ने छ ।
बैशाख १ गते देखि नै लागू हुने गरि कामना सेवा विकास बैंकले पनि नयाँ ब्याजदर तोकेको छ । बैंकले तोकेको नयाँ ब्याजदर अन्तरगत ३.५० प्रतिशत देखि ८.५० प्रतिशत सम्म ब्याजदर प्रदान गर्ने छ । बैंकले नर्मल सेभिङ, सुभारम्भ सेभिङ, सभल नारी सेभिङ खातामा समान ३.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ भने कामना सेवा प्रगति बचत खातामा ५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसैगरी मुद्दती निक्षेप अन्तरगत ३ महिने मुद्दती निक्षेपमा ७ प्रतिशत र ३ महिना देखी १ वर्ष सम्मको मुद्दती निक्षेपमा ८ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ । कम्पनी तोकेको नयाँ ब्याजदर अन्तरगत १ वर्ष बढिको मुद्दती निक्षेपमा ८.५० प्रतिशत ब्याज तोकेको छ ।
Previous: नयाँ वर्षको राशिफल : वि.सं.२०७८ साल बैशाख ०१ गते । बुधबार । ईश्वी सन् २०२१ अप्रिल १४ तारिख
Next: अभिमुखीकरणको बायोमेट्रिक हाजिरी नमिले पनि नेपाली कामदार विदेश जान पाउने